एमालेसंग भिड्न गठबन्धनलाई गाह्रो ! | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतबार, कार्तिक २८, २०७८ मा प्रकाशित
आफूले आफूलाई समाल्न नसक्दा हाम्रो प्रचण्ड काम्रेडलाई ठूलो घाटा भयो । माओवादी पार्टीलाई जस्तै एमालेलाई पनि आफ्नो पकडमा राखेर क¥याप्प पारेको भए अहिले रातको निद्रा न दिनको भोक हुने थिएन । काम्रेडले हतार गरेर १९ पेजको छोडपत्र लेखे । सुझो न बुझो तीन पटकसम्म ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य सम्मेत नरहने गरी घोक्रेठ्याक लगाए । आखिर भुत्लोभाङ केही भएन । ओलीले त अहिले तहल्का मचाई राका छन् । हाम्रो माओवादी, नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता र स्वतन्त्र मतदाता पनि तछाडमछाड गर्दै एमालेमै प्रवेश गर्दै छन् ।
नमस्कार है विध्वंसे काका ! के सोचेर झोक्राई राछौ कुन्नि ! यो सण्डे कान्छाले पो यता जाउँ भनेर आको हौ हामी त । हाम्रो नेपाली कांग्रेसका बुढाहरू पनि एमाले प्रवेश गरे छ । केटाहरू पनि उतै जानलाई चमचमाउदै छ अरे । म चै उनार्लाई रोक्न सकिन्छ कि भनेर आको ।
लु पटक्कै जान दिनु हुँदैन है । हाम्रो माओवादीको त विरुवा पनि नराखी सकी दिहाल्यो । अब तिमार्काे कांग्रेसतिर सल्किए छ । त्यता पनि सक्छ होला । होईन यो ओली खलकलाई कसरी रोक्ने हो ?
तिमार्को यही पाराले चै कार्यकर्ता रोकिदैन । नेपाली कांग्रेस त झटारो हान्ने हो झरे फल, नझरे असफल । काका तिमार्को माओवादी चैं प्रचण्डले बोलेपछि ‘त्यो पुरा हुन्छ हुन्छ !’ भन्ने पलेटी कस्ने बस्ने । माओवादीको नीति, सिद्धान्त, विचार, पद्दति के हो ? देश विकासको एजेण्डा के ? त्यै ओलीलाई गाली गर्ने, एमसिसी पास गर्न सही धस्काएर पठाएको पत्र लुकाउने, पत्रमा त्यस्तो छदैछैन भन्ने तर आफू चोखो छु भनेर देखाउन मात्र भए पनि पत्र सार्वजनिक गर्न नसक्ने । तिमार्को नीति यही हैन ? अनि कार्यकर्ता निचोरिएर बस्नु पर्ने र जनता लर्को लागेर तिमारू तिर आउनु पर्ने ?
निचोरिएको कुरो नगर सण्डे । तँ टिमुर्किएर बोल्दै छस् । हाम्रो जल्दोबल्दो बेलामा तिमारू जस्ता कांग्रेस र एमालेलाई गाउँ निकाला र टुक्रा–टुक्रा पारेर फाल्नेहरू अहिले पनि हाम्रो माओवादीको नेता छन् । अहिले हामीलाई मान्छे नगन्ने ? ओली बाहेक अरुलाई नेता नगन्ने, एमाले बाहेक अरु
पार्टी नै नठान्ने । जनता भनेका नाथेहर्लाई २०६४ सालमा मतपत्र भएको बाक्सा ‘चेन्ज’ गर्दा र बुथ कब्जा गरेर हामीले एकलौटी मत हाल्दा पनि देखेकै हो । अब आउने चुनापमा पनि त्यसै गर्छौं र एमालेलाई पछार्छौं ।
आफू पाहा पछारिए जसरी पछारिएको थाहा छैन । अर्कोलाई पछार्ने धमास दिन्छौ । विध्वंसे काका तिम्रो प्रचण्डलाई खबर पठाउ पार्टी विस्तार कसरी गर्ने, कार्यकर्ता कसरी बढाउने अनि चुनापमा जाँदा कुन मुद्दा बोकेर जाने ? ओलीलाई सरापेकै भरमा जनताले पत्याउदैनन् । राष्ट्रियसभा चुनापमा त गठबन्धन मिलेर जाने निर्णय गरे यसमा १९ सिटनै गठबन्धनले जित्छ । किन भने हाम्रो कांग्रेसको राम्रो भोट छ । त्यसपछिको चुनापमा कोर्रा हान्छ एमालेले ।
के एमालेको डर देखाउछस् भिरघरे ! यदि तेरो कांग्रेसले गति छाडेन भने र गठबन्धन टुटेन भने प्रतिनिधिसभामा एमालेले एक सिट पनि जित्तैन । त्यसको लागि हामी छौं ।
तिमारू त छौ नि काका । प्रतिनिधिसभा चुनापमा नेपाली कांग्रेसले एक्लै लड्ने निर्णय गर्यो भने के गर्छौ? त्यसको विकल्पमा केही सोचेको छ ? कि कांग्रेसले बोकेर पनि बैतरर्णी तार्छ भन्ने नै हो ।
हेर सण्डे ! कांग्रेसलाई प्रचण्डले ठूलो गुन लगाएको छ । प्रधानमन्त्रीको पद किस्तीमा हालेर देउवालाई टक्र्याउनु भनेको चानचुने कुरो होइन । त्यस कारण कांग्रेसले चुनापमा हामीलाई साथ दिनैपर्छ । होइन भने हामी हतियार उध्याउन थाल्छौं ।
पहिला पनि कांग्रेसलाई सफाया गरेकै हौनी काका ! अनि गत स्थानीय चुनापमा कांग्रेससँग लिपिक्क भएर टासियौ त्यसपछि भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेसँग लिसो बनेर जोडियौ। हाम्रो कांग्रेसले तिमारू माओवादीहर्लाई असाध्यै राम्रो गरी चिनेको छ। अब आउने चुनापमा तिमार्ले पनि हाम्रो कांग्रेसलाई चिन्ने छौ।
ठिक भने भिरघरे दाइले ! कहिले कसलाई काँधमा बोकाको छ, कहिले कसलाई । चितवनका कांग्रेस सभापति र गगनले त चुनापमा कसैलाई नबोक्ने, कांग्रेसले आफ्नै चुनाप चिन्ह रुखमा भोट हाल्ने भनेर भाषण नै दिइसके । अझ चितवनबाट बाउ–छोरीलाई नै लखेट्ने भनेर कांग्रेसीहरू जागेका छन् ।
मेरो बंगारा कटकटाउन थाली सक्यो धम्की नदे । हाम्रो प्रखर राष्ट्रवादी नेता काम्रेड प्रचण्डले कान फुकी सकेपछि देउवाले ‘कांग्रेस र माओवादी एउटै हो’ भन्न बेर लाउँदैनन् । तिमार्ले भन्दैमा केही हुनेवाल छैन । रामचन्द्र पौडेलले पनि भनिसके ‘गठबन्धन गरेरै होमिदा पनि एमाले नै ठूलो पार्टी बन्ने लक्षण देखियो’ भनेर ।
हेर काका ! हिजो एमालेले सबै ठाउँमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्यो । अब मंसिर १० र १२ चितवनमा थामी नसक्नु भीड ओइरिन्छ । भब्यताका साथ महाधिवेशन सफल बनाएर दुनियाँदारलाई देखाई दिन्छ । तिमार्काे माओवादीले महाधिवेशन भनेको कुन चराको नाम जान्दै जानेन । कांग्रेस महाधिवेशन सारेको सारेईछ । अरू पार्टीको के गणना गर्नु ।
सण्डे तँ धेरै जान्ने न हो । हाम्रो माओवादीको महाधिवेशन किन गर्ने ? अरू पार्टीको जस्तो नेतृत्व परिवर्तन गर्नु परेको छैन, नीति–सिद्धान्तको हामीलाई आबश्यक नै छैन । अब कांग्रेस पनि माओवादीकै लाइनमा आइ पुगेको छ ।
लु सण्डे ! यस्ता हावा गफ सुनेर नबसौं । काका जाउ उभिण्डे खोलामा मुख धुन । हामी लागौं घरतिर ।